मनिस , मानिस बिच त्रास ,, कहिले उम्केला यो कोरोना ? - onlinekarnali.com
आजः बुधबार, असार ९, २०७८
मनिस , मानिस बिच त्रास ,, कहिले उम्केला यो कोरोना ?
। ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १५:१५ मा प्रकाशित
बैशाख १० मुगु
कोरोना भाईरस नाम सुन्दा लाग्छ मृत्युको राजा भनेर । अहिले यो शब्द वालवालिका देखि वृद्धवृद्धा सम्म नपुगेको होईन । अहिले यो शब्दले देश नै आक्रान्त भईरहेको छ । एकातिर मान्छे मान्छे बिच पनि डराउछन कोरोनाले गर्दा ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरस कोभिड १९ ले गर्दा विश्वनै आक्रान्त भईरहेको छ । यस महामारीले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भने छोएको छैन । शिक्षा , स्वास्थ्य , आर्थिक , सामाजिक , भौतिक , हिसावले पछाडी परेता पनि हिमाली जिल्लामा भने कोरोना भाईरसले नछोएको देखिन्छ ।
कोरोनाले गर्दा पुर्ण रुपमा लकडाउनमय भएको छ । ठुला ठुला मुलुक हरुपनि यसको चपेटामा परेका छन् । यस्ता धनि देश हुन त दुरदर्शा देख्नु परेको छ भने हामि नेपालीहरु सिंगो एक झिंगा सरि पनि छैनौ । यदि यो भाईरसले नेपालमा भयावह अवस्था लियो भने सरकारको हावामा पात हल्लिए सरह हनेछ ।
हामी त झन सानो मुलुकको जनता हामीलाई कोरोनाले छोएर जान थाल्यो भने हामीलाई कोरोनाको यो कहरबाट निस्कन एकदमै सास्ती खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देश अहिले ३ तहको सरकार छ । संघिय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यि सरकारहरुले आफ्नो तह तप्का बाट कोरोना भाईरस न्युनीकरणको लागि केही पाईला सारेका छन् । भनौ नेपालका ७ वटा प्रदेश मध्ये एक प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश । यो प्रदेशमा खासै विकासका दृष्टिकोणले फड्को मारेको देखिदैन । सामान्य गर्भवति महिलाको राम्रो सँग उपचार हुदैन भने कसरी पिसिआर मेसिन यहाँ सम्भव होला त ? यस भन्दा अगाडी ७ वटा प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ देखिएको थिएन ।
यसमा भन्ने गर्थे कर्णाली प्रदेश सरकार शक्तिशाली भएर होला यस्ता नाना थरिका कुराहरु पोखिए ।
विडम्वना अवश्य पनि कोरोना नछिरेर छोड्यो त । यस कोरोनाले न त मन्त्री , न त धनि न त गरिब भन्छ । ग्रामिण क्षेत्रका बुढापाखाले भन्ने गर्थे ‘‘अस्पताताल गए रोग देखाउछ भने धामि गए दोग देखाउछ ’’ भन्ने जस्तै उखान अहिले पनि सुन्न सकिन्छ ।
अर्को तिर सरकारले हर प्रयास गरेको छ कोरोना विरुद्ध लढ्न अनि हामी नि निरन्तर यससङ्ग लढ्न आफ्नो कलम दौडाइरहेका छौँ। आफू सुरक्षित छु भन्ने मनसायले हरपल हजुरहरुको लागि सहि सूचना प्रवाह गर्न दौडिरहेका छौँ।
हजुरहरुको लागि मात्र तर दुख लाग्छ , हामीहरु अनि दिनरात सेवा र सुरक्षामा खटिने स्वास्थकर्मी , सुरक्षाकर्मिहरु हजुरहरुलाई कोरोनाको कहरले नछोओस भनेर आफ्नो ज्यान अनि घर परिवारको ज्यान जोखिममा पार्दै कोरोनाको कहर मोलिरहेका छौँ ।
तर हजुरहरु सरकारले बनाएको लकडाउन उलंघन गर्न तल्लिन हुनुहुन्छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ यो नालायक सरकारले केही गरेन । कति सजिलो छ, अरुलाई दोष दिन। हामी आफू दायरामा बसौँ अनि अरुलाई दायरामा ल्याउन कम्मर कसौँ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवस्था भने खुकुलो पारेता पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका केही जिल्लाहरुमा पुरै शिल गरिएको छ भने कुनै जिल्लामा केही न केही । अनि कसरी हामि सुरक्षित रहन्छौ , रहन आग्रह गर्छो ‘‘आफु भलो त जगत ’’
हामी निरन्तर सबै मिलेर कोरोनाको सामना गरौँ । हामी अनि ती स्वास्थ्यकर्मि सुरक्षाकर्मी अनि जो यो कोरोना विरुद्ध निरन्तर अभियानमा छन् । मेरो तर्फबाट सलाम छ उनिहरुलाई, जो दिनरात सेवानै तल्लिन छन् । रहरले घरबाट उनीहरु टाढिएका होइनन।
किनकि स्वास्थकर्मि अनि सुरक्षाकर्मी सरकारको नुन खाएका छन् । घर परिवार सङ्ग बस्ने मन हुँदाहुँदै पनि निरन्तर सेवामा लगिरहेका छन् । अनि हामी राष्ट्रका चौथो अङग भनिने पत्रकार मन लाग्छ घर बस्न। तर हाम्रो कर्मले घर बस्न दिदैन किनकी हामी चाहान्छौँ ।
केही दिन अगाडी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा परीक्षण गरिएका सबै स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । यो सुन्दा लाग्छ सायद अव हामि यो भाईरस बाट टाढा छौ भनेर ।
साविकका कर्णाली अञ्चल भित्र पर्ने पाँच जिल्लामध्ये मुगु, हुम्ला, कालिकोट र जुम्लाबाट विभिन्न मितिमा सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएका दुईहजार ७ सय ५५ जनाको स्वाब पिसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
प्रतिष्ठान जुम्लाका निर्देशक डा मंगल रावतले प्रतिष्ठानमा शुक्रबारसम्म सङ्कलित ती स्वाबको पिसीआर परिक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उनले सुनाए । भारत गएका तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्थानीयवासी भित्रिने क्रम बढदै जान थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएर स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको डा रावतको जोड छ ।
प्रतिष्ठानमै ४२४, कालिकोटबाट ६९५, मुगुबाट ३५१, जुम्लाबाट ७८९, नेपाली सेना ७०, हुम्लाबाट ४०८, पत्रकार १८ जनाको स्वाबको पिसीआर परीक्षण गरिएको हो । आरडिटी पोजेटिभ देखिएका हुम्ला नाम्खाका दुई र मुगु खत्याड गाउँपालिकाका एक जनाको पिसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यस्तै मुगु जिल्लाको परिशची भेगमा पर्ने खत्याड गाउपालिकामा १ जना पुरुष र १ जना युवतिमा गरि २ जना कोरोना भाईरस परिक्षण गर्दा उनीहरुलाई आरडिटि रिपोट पोजेटि देखियो ।
यो सँगै मुगुका स्थानीयहरुमा सन्त्रास फैलियो । कतिपयको त होस नै थिएन । अव हामि पनि कोरोनाको जालमा पसिसक्यौ भनेर । खास यो एउटा संकेत मात्र रहेछ । यि दुई जनामा आरडिटि पोजेटिभ आए पछि उनीहरु लाई नानाथरीका कुरा काट्न थालियो ।
बिचरा उनीहरु लाई के थाहा मलाई यस्तो छ भनेर । दैवको खेल हो। क्हिले कस्तो दुरदर्शा आउछ भनेर ।
तर अन्तिममा उनीहरु लाई पिसिआर परिक्षणको लागि जुम्लामा पठाईएको थियो , यसमा नतिजा आयो नेगेटिभ अर्थात कोरोना भाईरस नभएको रिपोट आयो । यो रिपोट पश्चात मुगाली जनताको मुहारमा खुसिका केही पलहरु आए ।
अत : केही समय पछि कर्णालीको दैलेखका एक युवामा कोरोना संक्रमण देखियो । भारतबाट आएका उनलाई थप उपचारका लागि दैलेखबाट सुर्खेत पठाईयो । एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनायो ।
यसको राम्रो सँग घाउ सेलाउनै नपाउदा शनिवार अर्थात आज फेरि ३ जनामा कोरोना भाईरस संक्रमणको पुष्टि भयो । यो सँगै कर्णालीमा कोरोना बाट अहिले सम्म ४ जना पुगेका छन् । के अ वयतिकैमा सिमित होला कि ? झन बढ्लात ?
यदि हामी सरकारलाई अनि अरु अरुलाई दोष दिदै बरालिन थाल्यौ भने हामी कोरोनाको कहर बाट कहिले उम्कन सक्दैनौ त्यसैले यो बेला भनेको आफू नि बाचौ अनि अरुलाई नि बचाऔ भन्दै एक ढिक्का भएर लाग्नु पर्ने बेला हो ।
अनि सरकारले बनाएको कोरोना विरुद्धको लकडाउन लाई पुर्ण रुपले पालना गर्ने सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व पनि हो । यसो गरे मात्र हामिले चाहे कोरोनाको कहर बाट उम्कन धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
कोरोना भाइरसको कहर ,, अरुको नपरौ भर ।।
हाम्रो मुटु दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको थियो, जिना
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटन
यहाँ के भइरहेको छ ?
फूलमा मौसम र मलमासको असर
कुलमान बाहिरिएपछि बिजुली जाने समस्या बढ्यो, दोष मुसाको कि कर्मचारीको ?
सरकार र नेतृत्वप्रति यति धेरै वितृष्णा किन ?
दुधे बालकसँगको जंगल यात्रा
नेपाली जनताको जीवनरक्षाका लागि खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रपतिको निर्देशन
पार्टी परिर्वतन गर्नेलाई निष्कासन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय
विमलेन्द्र, शशांक र प्रकाशमानको लञ्च मिटिङ, देउवाको विकल्पबारे छलफल
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विरुद्धमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
कर्णाली नदीमा दाउरा टिप्न जाँदा एक जना बेपत्ता
दीपक मनाङेले भेटे प्रचण्ड र बाबुराम